ShweMinThar: ကလေးတွေကို ထိန်း​ကျောင်း လမ်းညွှန်ရာမှာ
ကလေးတွေကို ထိန်း​ကျောင်း လမ်းညွှန်ရာမှာ
အနာဂတ်​ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးတွေကို လက်​ဦးဆရာ မိဘတွေက ဘယ်လိုထိန်းကျောင်း လမ်းညွှန်ပေးကြမယ်ဆိုတဲ့နည်းပေးလမ်းညွှန်တွေဟာ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပါပဲ။ ကိုယ်တွေ မြန်​မာတိုင်းရင်းသားတွေမှာ ကလေးသူငယ်များ ထိန်း​ကျောင်း ပြုပြင်​ လမ်းညွှန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားသာချက်​ထက်​ အားနည်းချက်များနေသလား တွေးစရာ စာတိုလေးတွေကို အွန်​လိုင်းပေါ်မှာတွေ့လို့ ပြန် Share ပေးပါရစေ။
'ဂျပန်က ကလေး များနဲ့ မြန်မာ ကလေးများရဲ့ ကွာဟ ချက်များ'
1. ဂျပန်က ကလေး တွေ လေးလံလှတဲ့ ကျောင်းသုံး ကျောပိုးအိတ်ကြီးတွေ လွယ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ရထားစီး၊ကားစီးပြီး ကျောင်းတက်နေရ ချိန်မှာ မြန်မာ က ကလေးများ ကုန်းပိုးစီးပြီး ကျောင်းတက်ကြတယ်။
2. ဂျပန်က ကလေးများ မူလတန်းမှာ အလှည့်ကျ စားဖိုဝင် နေရချိန်မှာ မြန်မာက မူလတန်းကလေးများ နောက်က ထမင်း လိုက်ခွံ့ နေရတယ်။
3. ဂျပန်က မူကြိုကလေး တွေ အများသုံးအိမ်သာမှာ ကိုယ့် ဂျိုး ကိုယ် ထုတ်ပြီး ရှုးရှုးပန်းနေချိန်မှာ... မြန်မာက ကလေးတွေ
'ရှူး ရှူး 'ဆိုပြီး ဘောင်းဘီ မစိုအောင် သေးတည် နေရတယ်။
4. ဂျပန်က ကလေးတွေ ခြေခေါက် လဲ၊ စက်ဘီးလဲ တဲ့ အချိန်မှာ( မိဘက ရပ်ကြည့်နေပါတယ်...ကူပြီးမထူပါဘူး) ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထ ရပါတယ်။မြန်မာက ကလေးများ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ 'ဟဲ့သားလေး/ဟဲ့ သမီးလေး ' ဆိုပြီး အရင် သည်းသည်းလှုပ်ကြတယ်။
5. ဂျပန်က ကလေးတွေ 'ဆရာမ အခုသင်တာ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိဘူး ...ပြန်ရှင်းပြပါ' တောင်းဆို ရဲ တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာက ကလေးများ ...' 'ဟဲ့ ငါစာသင်တုန်းက ကောင်းကောင်း နားမထောင် ဘူး နောက်တခါ အဲ့လို အမေးမြန်းထူရင် အရိုက်ခံရမယ်' ....ကြိမ်းမောင်းခံနေရတယ်...
6. မြန်မာ က ကလေးတွေ ....'ဟှောင့် ယီးလား လို့ ဆဲလိုက်စမ်း ' သင်ပေးနေချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေကို ခါးကုန်း ဦးညွှတ်တာသင်ပေးနေကြတယ်။
7. မြန်မာက ကလေး တွေကို ပတ်ဝန်းကျင် က ချစ်လို့ဆိုပြီး ငိုအောင်၊ စိတ်မတို တိုအောင် စနေချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေ ဂိမ်းတစ်ခုခု ပေး ဆော့ပြီး 'မင်း လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်' မွေးပေးနေကြတယ်။
8. မြန်မာ က ကလေးများ သားရေ...လမ်းထိပ်က ဆိုင်မှာ အရက်တစ်လုံး သွားဝယ်စမ်းကွာ....ခိုင်းတဲ့ အချိန်မှာ ... ဂျပန်က ကလေးတွေ သဘာဝ ဘေး(ငလျှင်လှုပ်၊ မုန်တိုင်းတိုက်၊ ဆူနာမီ ) လာမယ့် အချိန်မှာ အစာ ရေစာနဲ့ ဆေးဝါး ဘယ်လိုရယူရမယ်၊ အသက်ဆက်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကို သင်ပေးနေကြတယ်။
9. 'သား ရေ... က စမ်းကွာ က က' ဆိုပြီး ဆောင်းဘောက်စ်သံ အကျယ်ကြီးဖွင့်မြှောက်ပေးနေချိန်မှာ ...ဂျပန်က ကလေးတွေ 'ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံခြင်းမပြုဖို့ ကိုယ့်ကြာင့်သူတပါး အနှောက်ယှက် မဖြစ်ဖို့ သင်ပေးနေကြတယ်။
10. မြန်မာက ကလေးတွေကို 'ရန်ဖြစ်ရင် မင်းက အရင်ဦးအောင် လုပ်ခဲ့နော်...ခံလာရရင် မင့်ကို အရင် ရိုက်မှာ...ခံမလာရစေနဲ့ ' သင်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေ 'လူနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေရမယ်၊ ဘယ်လို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်'....ဆိုတာ သင်ယူနေကြရတယ်။
ကဲ.....ဘယ်သူတွေ ၊ ဘာများ လွဲနေကြသလဲ.....။
အစ္စရေး လူမျိုးလိုလည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
ဂျူးလူမျိုးများဟာ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးသော လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုးကို ကမ္ဘာမှာ ဥာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလူမျိုးလို့
၂၀၁၅ခုနှစ် ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ ဂျူးလူမျိုး လူဦးရေး ၁၄.၂ သန်းရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၂%ရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးဟာ....
ဂျူးလူမျိုးများဟာ ၂၀ ရာစုအတွင်း နိူဘယ်စုရှင်များရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ ၊
အမေရိကန်နိုင်ငံ သြဇာအရှိဆုံးသူများစားရင်းထဲက ၅၀% ၊
အမေရိကန် နာမည်အကြီးဆုံးသော ပါမောက္ခတွေထဲမှာ ၃၀% ၊
အမေရိကန် စာပေ၊ တေးဂီတ၊ ပြဇာတ်လောက မှာ ၆၀%၊
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းထဲမှာ ၅၀%၊
Forbes စားရင်းအရ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ထဲမှာ
ဂျူးလူမျိုးက ၁၈ ဦး တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြသလို၊
အိုင်စတိုင်း၊ ကားလ်မတ်စ်၊ တာအုိုဝင် စသည်တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။
သုတေသနအရ ဒီလိုအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအားလုံးထဲမှာ
ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ မိသားစုနီတိနဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နည်းလမ်းများဟာ
သူတို့ဘာတွေကို တန်ဖိုးထားလို့ ကလေးများကို
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရပ်တည် အားကိုးစေခြင်း
ကောင်းမွန်တဲ့ ကလေးပညာရေးဟာ တိုးတက်မူ အားလုံး ၊ ကောင်းကျိုးအားလုံးရဲ့ အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ ဂျူးတို့က ယုံကြည်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်မူနဲ့ ကိုယ့်ကိုကို ရပ်တည်နိုင်မူ၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးတတ်မူကို အလေးထား ပျိုးထောင်ပါတယ်။ ကလေးကို အချစ်လွန်ကဲတာမျိုး၊ ပိုးမွေးသလို မွေးတာမျိုးကို လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ သူတို့စကားပုံတစ်ခုက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ “ ၅ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ အရှင်သခင်၊ ၁၀ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ကျွန်၊ ၁၅ နှစ်ကလေးဟာ အဖေနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားပြီ” တဲ့။ ဆိုလိုတာက ၅ နှစ်ကလေးဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ချစ်မယ်။ ပျိုးထောင်မယ်။ ၁၀ ကျရင် သူနိုင်တဲ့ဝန်ကို ထမ်းခိုင်းမယ်။ မိဘများက သူနိုင်သမျှ အချိန်ရရင်ရသလို ခိုင်းရမယ်။ ၁၅ နှစ်ကျရင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်စေရမယ်။
၂ ။ စာအုပ်ချစ်တဲ့ဓလေ့
ကလေးများသိတတ်ခါစအရွယ်မှာပဲ ဂျူးမိသားစုများဟာ ပျားရည်တစ်စက် တို့ထားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို ကလေးအားနှမ်းရူပ်စေပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ စာအုပ်ဟာ အလွန်ချိုမြိန်ကြောင်း၊ နှစ်သက်စရာ အလွန်ကောင်းကြောင်း သိစေတဲ့ သဘောပါ။ ဂျူးမိသားစုတိုင်းလိုလို စာအုပ်စင်ထားရှိပြီး စာအုပ်စင်များကို ခေါင်းအုံးဘက်မှာ ထားရပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ ချစ်ရုံတင်နဲ့ မပြီးပဲ လေးစားရတဲ့သဘောပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုသူတို့လည်း စာအုပ်ချစ်တဲ့လူမျိုးလို့ တင်စားကြတယ်။ သုတေသန စာတမ်းအရ အသက် ၁၄ နှစ်အထက် ဂျူးကလေးများဟာ တစ်လအနည်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၃။ ဥာဏ်ပညာကို အလေးထားတတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း
ဂျူးမိသားစုထဲမှာ ကလေးများနည်းနည်းအသိရှိလာပြီဆိုရင် မိခင်ဖြစ်သူက ဒီလိုမေးမြန်းလေ့ရှိတယ်။ “တကယ်လို့ သားရဲ့အိမ်က မီးလောင်သွားတယ်၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ဘာမှမကျန်အောင် အလုခံရတယ်။ သားဘာကိုယူပြီးထွက်ပြေးမလဲ” တဲ့ ၊ ကလေးက ရွှေတို့ ၊ ငွေတို့ ဖြေဆိုရင် မိခင်က ပြန်စဉ်းစားအုံး၊ အဲဒီပစ္စည်းဟာ အရောင်မရှိဘူး၊ အနံ့အရသာလည်း မရှိဘူးလို့ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သားက “ ဥာဏ်ပညာ” လို့ ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ အထိ မိခင်က တစ်ဖြည်းဖြည်း လမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက ပညာရွှေအိုး လူမခိုးနဲ့ ခတ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ကလေးတွေ သူဖာသာသူသိစေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိဘနဲ့ဆရာများက တိုက်ရိုက်ပြောပြတာများနေပါတယ်။
၄။ စာအုပ်အများကြီးကို ၀န်တင်ထားတဲ့ “လား” မဖြစ်ပါစေနဲ့
စာတအားဖတ်တော့ ဒီစကားပုံ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကလေးများကို ငယ်ငယ်ကတဲက စာဖတ်အောင် သွန်သင်ပေးကြတယ်။ ပြီးရင် စဉ်းစား တတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးကြပါတယ်။ သူတို့အယူအဆအရ ဖတ်မှတ်လေ့လာခြင်းဟာ အတုခိုးခြင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခြင်းနဲ့ အသစ်ဖန်တီးတတ်ခြင်းသည်သာ အဓိကကျတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့သူကို စာအုပ်ကိုဝန်တင်ထားတဲ့ “ လား” လို့ စကားပုံနဲ့ ခိုင်းနိူင်းထားပါတယ်။
၅။ တွေးခေါ်ခြင်းဆိုတာ သံသယနဲ့ အဖြေတို့ ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစကားပုံပါ။ မိဘစကား၊ ဆရာစကားအပါအ၀င် ဘယ်သူပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် သံသယ အရင်ဝင်ခုိုင်းပါတယ်။ သံသယ၀င်မှပဲ အဖြေမှန်ထွက်တဲ့သဘောပါ။ ကျနော်တို့ဆီက ပြောတဲ့အတိုင်း နာခံမှ လိမ္မာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကွဲလွှဲပါတယ်။
မိဘများ အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သက်နိုင်ကြပါစေ။
Credit: Sayar Aung Ko Latt
Posted by Alex Aung at 7:55 AM
Labels: Opinion, ပညာရေး၊
Japanese Style Sukiyaki Noodle - Bejing Duck - Pot...
The best way to build muscles✌
HR ​တွေက ဘယ်​ဘက်​ကလဲ? ရာထူးတိုးချင်ရင်?
ဟင်းထုပ် - ထမင်းလက်သုပ် - နန်းကြီးသုပ် - သျှမ်း ...
သိချင်မိသော ​မေးခွန်း အချို့ (၁)
Labour နဲ့ပတ်သက်သော သတင်းစုံ
ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း နားလည်ဖို့
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိ...
The Golden Diet Plan
Kyay Oh _ Fish Cake Soup _ ဆီချက်_တော့ပိုကီ _ ရှဘူ...
“ဂိတ်စ - ဂိတ်ဆုံး”
၁ နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးနည်း
လူငယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဦးစီးတဲ့ ကိုယ်လုံပညာသင်တန်း
ငါးခေါင်းကြော်နှပ် - ပုဇွန်​ ဆီပြန် - ငါးသလောက်ပေါင်း
Misconception - တရားဘာဝနာအပေါ်လွဲမှားသောအယူအဆ
"ထိရောက်သော မန်နေဂျာများရဲ့ အလေ့အကျင့်(၇)ရပ်"
Michael Moe Myint
ဘာ့ကြောင့်6packs abs မရသေးတာလဲ ?
Dhamma ကိုအလေးထား ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ပြင်
အသက် ၅၀ နောက်ပိုင်း ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်
Korean Fishcake Soup (EOMUK GUK (ODENG GUK)) - Sea...
♪ “Asus ZenBook UX310UA” ♫
နှစ်ဦး တရားဓမ္မ (Newyear Dhamma)